Qoor Qoor iyo laftagareen oo deg deg ku tegaya Muqdisho - Awdinle Online
Qoor Qoor iyo laftagareen oo deg deg ku tegaya Muqdisho
Saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa inay Magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtaan Madaxwaynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor) iyo Madaxwaynaha Maamulka Koonfureed Galbeed Cabsi Casiis Xasan Maxamed Laftagareen.
Labada Madaxweyne ayaa haatan ku sugan dalka Turkiga oo dhawaan siyaabo kala duwan ay u tageen, kadib markii uu muddo bil gudaheed ah oo uu baaqday Shir uu dowlad Goboleedyada ugu yeeray Madaxweynaha uu muddo xileedkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa warar soo baxayay waxaa ay sheegayeen in Madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay shuruud ku xireen Shirka ay qaban qaabisay Beesha Caalamka ee la filayo in dhawaan lagu qabto Teendhada Afisiyooni ee Magaalada Muqdisho.
Madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ay cadaadis kala kulmayeen Beesha Caalamka oo ka dalbaneysay inay Muqdisho dib ugu soo laabtaan, taas oo soo dedejisau safarkooda Magaalada Muqdisho.
Previous articleQarax ka dhacay Gaallacyo iyo Sarkaal lala beegsaday
Next articleGuddiga Qaran ee Gurmadka abaaraha oo saakay u safray Gobolka Gado